ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း: 07/15/12
တတိယအကြိမ် အညတြ သူရဲကောင်းဆုပေးပွဲ ဖိတ်ကြားခြင်း ဂျပန်
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 10:33 PM No comments:
ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့နောက်ကြည့်မှန် စာအုပ် ဖွင့်ပွဲ ဓါတ်ပုံသတင်း
နောက်ကြည့်မှန် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင်၏ လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုကျော် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား အရွယ်က ရေးသားခဲ့သည့် နောက်ကြည့်မှန်ွှဝထ္ထုစာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲ နှင့် အမှတ်တရလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကို ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီက ရန်ကင်းစင်တာတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် မြင်ကွင်းဓာတ်ပုံများ။
ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့နောက်ကြည့်မှန် စာအုပ် ဖွင့်ပွဲ ဓါတ်ပုံသတင်း ချိုလေး၊ The Voice Weekly
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 6:21 PM No comments:
by ကိုကြည်နိုင် ကျုံတိုင်းရွာ on Sunday, July 15, 2012 at 2:01pm ·
ဆယ်နာရီ သုံးဆယ့်ခုနှစ်မိနစ်၊ 47 ခုနှစ် ဂျူလိုင်လ 19 ရက်
တစ်တိုင်းပြည်လုံး …. ဆွံ့အ
တစ်မျိုးသားလုံး ….. တိတ်ဆိတ်
လှည်းနေလှေအောင်း မြင်းဇောင်းမကျန် …. အသက်မဲ့
ဖျပ်ကနဲ .. ခဏလေးပါပဲ
တစ်တိုင်းပြည်လုံး … ပွက်ပွက်ညံဟီး
တစ်မျိုးသားလုံး … ဟုန်းဟုန်းလောင်မြိုက်
လှည်းနေလှေအောင် မြင်းဇောင်းမကျန် … ကူကယ်ရာမဲ့ ငိုကြွေးမြည်တမ်း။
အမိရယ် အဖရယ်လို့မှ ခေါ်စရာမရှိတော့
ဆိုပေမယ့်လည်း … …
အခုကဗျာလေးက ကျွန်တော်တို့မြို့(မောင်ထင်စာကြည့်တိုက်) မှာ ပြုလုပ်မယ့် နံရံကပ်စာစောင်ရယ်၊
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ မြို့နယ်ရုံးမှာ ပြုလုပ်မယ့် နံရံကပ်စာစောင်ရယ် အတွက် ကျနော် ရေးဖြစ်ခဲ့တာလေးပါ။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 2:34 PM No comments:
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 2:22 PM No comments:
အခုတော့ တချိန်က လယ်သမားခေါင်းဆောင်ကြီး ဆရာ စံရဲ့ ထုံး နှလုံးပိုက်ပြီး မတရား လယ်ယာမြေ သိမ်းပိုက်ခံရမှုတွေ အတွက် ထွန်တုံးတိုက်ပွဲ ၀င်နေကြတဲ့ လယ်သမားတွေကို ကဗျာဆရာ အောင်ဝေးရဲ့ ခံစား ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ကဗျာတပုဒ်ကို ဒီတပတ်အတွက် ရွေးချယ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 2:19 PM No comments:
မိမိတို.လယ်မိမိတို. ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးသည်ကို ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု နှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကို ထိခိုက်သော လုပ်ရပ်ဟု စွပ်စွဲကာ ပန်းတောင်းမြို.နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ဦးမြင့်သိန်းမှ မြို.နယ်အုပ်ချုပ်ရေး ရုံးတံဆိပ်ဖြင့်တားမြစ်ခဲ့ကြသည်.။လယ်သမားများသည်လည်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကို အလေးမထားသည်မှာ ..မိမိတို.မဟုတ်ယင်းတို.သာ ဖြစ်သည်ဟုဆိုကာဆက်လက်ထွန်ယက်ခဲ့ကြသည်.။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 2:18 PM No comments:
မင်္ဂလာဒုံမြို.နယ်၊ ရွှေနံသာမှ လယ်သမားများချီတက်ဆန္ဒပြမှူ့စတင်.
တိုက်ပွဲ စပြီ ရပိုင်ခွင့်တွေကို တောင်းတာ တရားတယ် တရားတဲ့တောင်းဆိုမှုမှန်သမျှ နေပြည်တော်အထိ ချီတက်တောင်းဆိုကြ။လူထု အလိမ်မခံရစေရန် ကျွန်တော်တို့မီဒီယာက တာဝန်ခံကြ ရမယ်
ကျားဖြူ အမတ်ကြီး ဒေါ်နန်းဝါနု ဆိုလို့ ... အသက် ၄၅ နှစ်ကျော်လို့ ထင်ခဲ့တာ ....
ဘွဲ့နှစ်ခု ယူ ၊ ကလေးနှစ်ယောက် မွေး .... ဘယ်တုန်းကများ မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ စီးပွားရေး ချွတ်ခြုံကျမှုဟာ ဆန်ရှင်ကြောင့်လို့ လေ့လာ သုံးသပ်လိုက်ပါလိမ့်နော် ... အသက်က ငယ်တော့လည်း ဆူလွယ် နပ်လွယ် ထင်ပါရဲ့နော် ။ ဖွတ်တွေ စည်းရုံးရ လွယ်တာပေါ့လေ
မပြောတော့ပါဘူး ၊ ပြောရင်လည်း ဒီဖက်က တိုက်ခိုက်တယ် ဖြစ်အုန်းမယ် ....
by Ko Myo on Friday, July 13, 2012 at 9:51pm ·
ခင်ဗျားတို့ သောက်ကျင့်တွေကို ပြင်ဖို့လို့
အာဇာနည်တွေ နှင့်တကွ ဗိုလ်ချုပ်တို့၏ကျေးဇူးကိုဤအခါသမယမှာကျွန်တော်
တို့ စာနယ်ဇင်း သမားတွေ အနေနှင့် အခြားသော မြန်မာပြည်သူ၊ ပြည်သားတွေ
““ဗိုလ်ချုပ်မပြောနှင့် ဗိုလ်ချုပ် သမီးအကြောင်းဗိုလ်ချုပ်သမီး ဓာတ်ပုံ ပါရင်တောင်
ရောင်းမလောက်ဖြစ်နေ တာ စာနယ်ဇင်းသမားတွေညတိုင်း ဗိုလ်ချုပ်ကိုဦးသုံးကြိမ်ချပြီး
အိပ်သင့်တယ်”” ဟူသော စကားမကြာ မကြာကြားရ တတ်ဖူးသည်ကိုး။
သို့ပေမင့် မရှက်တမ်းဝန်ခံရလျင်ဗိုလ်ချုပ်ကို ညစဉ်မပြတ် ရှိခိုးဦးချခြင်းမပြုဖြစ်ခဲ့ဘူးရုံမက
“ဗိုလ် ချုပ်ကျေးဇူးကြီးလှပါပေသည်” ဆိုကာ အိမ်ဦးခန်းမှာချိတ်ထားသော ဓာတ်ပုံကို လည်း
အထပ်ထပ်သင်ယူရွတ် ဖတ်ဖူးသည့်အာဇာနည်ခေါင်း ဆောင်ကြီး များ၏စာတွေကဗျာတွေ၊
သွားတဲ့စကားတွေ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီးသက်သေပြသင့်တယ်”” ဟူသော
အာဇာနည်နေ့မှာ ဥသြသံတွေကွယ် ပျောက်နေခဲ့ခြင်းကြောင့်လော။
အာဇာနည် ဗိမာန်ကိုသွားရောက်ဂါရ၀ပြုခွင့်တားဆီးပိတ် ပင်ခြင်းတွေ
ရုပ်သံမှာ အာဇာနည်နေ့ အကြိုဂုဏ်ပြုနှိုးဆော် သတိ ပေးမှုတွေမပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်လော။
ငွေစက္ကူတွေပေါ်မှာဗိုလ်ချုပ် ရုပ်ပုံလွှာတွေမပါရှိလာတော့ခြင်းကြောင့်လော ဟု
အာဇာနည်နေ့အပေါ် ကျွန်တော့် ပျက် ကွက်ခြင်းအဖြစ်တွေ အတွက် သို့လော
သို့ လော တွေးတောမိရင်းက လွန်ခဲ့သောလမှာ ဆရာကြီးဘဘကာတွန်း ဦးဖေသိန်း၏ သမီး
အစ်မ“ဇွန်ပွင့်” စာပေလက်ဆောင်ပေးလာ သည့်စာအုပ်ထဲကဗိုလ်ချုပ်မိန့်ခွန်းဖော်ပြချက်
အဆိုပါဖော်ပြချက်မှာ ချက်မှာဤဆောင်းပါး အစကောက်နုတ်တင် ပြထားသည့်ဗိုလ်ချုပ်
ပြီးတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ ကိုယ့်လူမျိုးက
နှစ်ပေါင်း ၆၅ နှစ်ကြာက“ပြင်ဆင်သင့်တာတွေပြင်ဖို့” ဟူ ၍မိန့်မှာခဲ့မှုအား
မည်သူတွေ လိုက်နာနိုင်ခဲ့ ကြ၊ အကျင့်တွေပြင်နိုင်ခဲ့ကြသည်ကိုကျွန် တော်
မသိပေမယ့် အကျင့်တွေပြင်နိုင် ခဲ့သူ တွေထဲမှာကျွန်တော်မပါနိုင်သေးခြင်း
ကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်၃၂နှစ်အရွယ် သာရှိခဲ့ပေမယ့် အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး
ပီပီ၊လူသဘာဝကို သိကာလူတို့၏ အကျင့် စရိုက်မှာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ကိုယ့်အကျင့်ကို
ပြောင်းလဲမပြနိုင်ပေမယ့် တစ်ပါးသူကိုသာ ပြု ပြင်ပြောင်းလဲစေလိုတတ်သည့်သဘော
ယခုကျွန်တော် အသက်၄၀ကျော်ခါမှတောင်သိလိုက်သလိုလို သာရှိသေးသည့်အဖြစ်
(ဤစာဖြင့်အာဇာနည်ကြီးများနှင့်တကွအာဇာနည် မြန်မာပြည်သူ့ အချစ်ပန်းဗိုလ်ချုပ်
ဦးအောင်ဆန်း၏ဆိုဆုံးမ မှကြားချက်များ အား လက်စုံမိုးရှိခိုးဂါရ၀ပြုပါ၏)
(ဤစာဖြင့်အာဇာနည်ကြီးများနှင့်တကွအာဇာနည် မြန်မာပြည်သူ့ အချစ်ပန်းဗိုလ်ချုပ် ဦးအောင်ဆန်း၏ဆိုဆုံးမ မှကြားချက်များ အား လက်စုံမိုးရှိခိုးဂါရ၀ပြုပါ၏)
“ဒီကဒို့ ဘယ်သွားကြမလဲ” ဟူသည့် စာအုပ်(၁၉၅၂ ခုနှစ်ကလန်ဒန်မှထုတ်ဝေခဲ့သည်ဆိုသော စာအုပ်ကို မြန်မာမှုပြုထားသည့် ဘဘဆရာကြီး ကာတွန်းဦးဖေသိန်း၏လက်ရာမွန်တစ်ရပ်
မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသားလှု ပ်ရှားမှုသမိုင်း ၁၉၀၃-၉၁ (၈၈)နှစ် - ကိုအောင်ထွန်းပြုစုသည်။ The History of Burmese Students' Activities(1903~1991)
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 10:48 AM No comments:
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 9:39 AM No comments:
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 9:31 AM No comments:
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 9:24 AM No comments:
by Yeyint Nge on Sunday, July 15, 2012 at 6:17am ·
သတင်းများပေးပို့ လာသော Yeyint Nge အားကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်..။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 9:18 AM No comments: